थाहा पाइराख्नुहोस् हरियो प्याजको यी ६ फाइदा...
जाडोको दिनमा बजारमा प्याजको पातको माग धेरै नै हुन्छ । यसको प्रयोग सब्जी, सूप एवम् अन्य व्यन्जनमा गरिन्छ । हरियो प्याज खानाले हाम्रो स्वास्थमा धेरै फाइदा हुन्छन् । यसले कोलेस्ट्रोलको स्तर कम बनाइ राख्छ ।
आफ्नो अलग स्वादको कारणले यसलाई धेरै नै मन पराइन्छ तर यसका यी ६ फाइदा कमालका छन् ।
२. हरियो प्याज खानाले रोग प्रतिरक्षा शक्ति बढ्छ । हरियो प्याजले अनुहारको चाँयाहरु हटाँउछ । यसको सेवनले आँखा तेजिलो हुन्छ । हरियो प्याजले शरिरमा माइक्रो न्युटिशन्स कायम राख्छ ।
५. पिसाब हुन बन्द भएमा दुई चम्चा प्याजको रस र गँहुको आँटा लिएर हलुवा बनाउनहोस् । हलुवा तातो बनाएर पेटमा लेप लगाउनाले पिसाब आउन सुरु हुन्छ । प्याज पानीमा उमालेर उक्त पानी पिएमा पनि पिसाब सम्बन्धी समस्याहरु समाप्त हुन्छन् ।